HomeWararka CiyaarahaMauricio Pochettino oo ka dhawaajiyay Sababta uu badalka ugu sameeyay Lionel Messi
September 20, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France 0
Tababaraha kooxda kubadda cagta PSG ee Mauricio Pochettino ayaa sharraxaad ka bixiyey sababtii uu u beddelay xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi kulankii Lyon ee Axaddii, taas oo keentay inuu laacibkani cadhoodo, kuna saydhiyo gacmaha isagoo diiday inuu salaamo.
Mauricio Pochettino oo warbaahinta la hadlay kaddib ciyaarta ayaa difaacay go’aanka uu Messi ku saaray ee uu ku keenay Achraf Hakimi xilli ay ciyaartu ahayd 1-1, ayna u baahnaayeen inay helaan goolal.
Qorshaha Pochettino ayaa shaqeeyey dhamaadkii waxaana goolka guusha u dhaliyey Mauro Icardi oo beddel kusoo galay.
Mauricio Pochettino oo wax laga weydiiyey sababta uu u beddelay Lionel Messi ayaa yidhi: “Qof walba wuu ogyahay in aanu haysano ciyaartooyo wanaagsan iyo koox tiradeedu tahay 35 ciyartoy. Aniga ayaa gaadhay go’aanka [beddelka Lionel Messi]. 11 ciyaartoy oo kaliya ayaanu garoonka gelin karnaa halkii marba, aniga ayaanay tahay inaan ka fikiro waxa noo wanaagsan ciyaar walba sida u fiican ciyaartoy kasta, sida uu sameeyo tababare kasta.
“Waxa aan halkan u joognaa in aanu go’aamo gaadhno. Mararka qaarkood dadku way ku farxi doonaan, mararka qaarkood na kuma farxi doonaan.”
Mauricio Pochettino waxa kale oo uu ka hadlay hadalladii uu ku yidhi Lionel Messi oo la arkayay inuu ka cadhooday beddelka lagu sameeyey, waxaanu yidhi: ‘Waxa aan weydiiyey sida uu ahaa, waxaanu ii sheegay inuu fiican yahay.”
Mauro Icardi oo beddel kusoo galay ayaa guusha u go’aamiyey PSG kulanka Lyon oo gool kala hormartay, waxaana uu Pochettino ku dooday inay u qalmayeen guusha.
“Waanu u qalmaynay guushayada, xataa haddii ay ilbidhiqsigii ugu dambeeyey tahay.”